Home News Madaxweyne Muuse Biixi oo ku wajahan Gobolka Sool
Madaxweyne Muuse Biixi oo ku wajahan Gobolka Sool
Wararka ka imaanaya Magaala Laascaanood ee Gobalka Sool ayaa sheegaya in lagu wado inuu madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo socdaal ku tago deeegaano ka tirsan Gobalkaasi.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi ayaa hada la sheegayaa inuu ku sugan yahay deegaanka Higlada oo 20KM u jira magaalada Tukaraq ee Gobalka Sool.
Muuse Biixi ayaa waxaa uu booqday Ciidamada millatariga ee ku sugan Magaalada Laasacaanood ee Gobalka Sool.
Madaxweynaha Soomaaliland ayaa maalmihii dambe Waxaa uu ku sugnaa Deegaano ka tirsan Bariga Soomaaliland.
Previous articleUrurka Al Shabaab oo waraaqo digniin ah ku daadiyay Gobolka Gedo
Next articleDood kulul oo leysku dhaafsaday Baarlabaanka iyo qiil loo la’ayahay (Daawo)
Maxay Tahay Sababta uu Iscasil Gudomiye ugu Haayo,Muxusa uso Fasaxay Qas...
Toogasho ka Dhacday gudaha Magaalada Dhuusa-mareeb.